Forum serasera malagasy Mpianatra tay Frantsa: ny fijeriko ny imantara aty - Dinika forum.serasera.org
Mpianatra tay Frantsa: ny fijeriko ny imantara aty
Fitohizan'ny hafatra : Mpianatra tay Frantsa: ny fijeriko ny imantara aty
harisoa32 - 21/03/2019 20:59
zaho Malagasy mipetraka sy mianatra aty Frantsa. Efa telo taona ahi no monina teto Ary efa azo lazaina fa efa patra ihany. Ny fihainana aty moa dia misy mahatsara azy, fa koa misy maharatsy azy, aleo tsorina. NY imantara eto aloha, dia try aotran’ny talocha intsony: talocha kanak, afaka makaty dia afaka miova filiere fa icao, dia val miainga any dago, dia int filiere ins Frana no try maintsy tazomina satria raha tay izana, dia annulé ny visa de séjour eto Frantsa.
Izaho aza izay mieritreritra ny hala eto, fa iansreo Malagasy monina ao Frantsa, raha izaha ianareo, araraoty ihany ny rsesaka securite sociale sy allocations irony, ary miezaha miasa any Frantsa, @zay, matanjaka ny retraite any Ariana, ary surtout, miezaha mihaina lava, @izay afaka manararaotra ny systeme de retraite any tsara.
elien8 - 22/03/2019 05:55
manantena ny fahasalmanao namako inona malaza any aminao any aleo mianatra any mba mahazo fahafinaretana aminy lafiny fahaizana sy fivoarana